ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်: Kelley Slagle | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး & Profiles: Kelley Slagle
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး & Profiles: Kelley Slagle
ကယ်လီ Slagle (အရင်းအမြစ်: ရွိုင်းကော့ဓါတ်ပုံ)
ကယ်လီ Slagle ဗီဒီယိုတစ်ကားထုတ်လုပ်သူများနှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏အယ်ဒီတာ, စက်မှုနဲ့ Linkedln သင်ယူအပါအဝင်ကော်ပိုရိတ်များနှင့် non-profit client များအတွက်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်, ကို Canon, FINRA နှင့် Adorama။ ကယ်လီအပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များမှာစပီကာဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် နှင့် LinkedIn တို့သင်ယူအပေါ်နှစ်ခုအတန်း၏စာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် National Geographic မှာလက်ထောက်အယ်ဒီတာနှင့် National Public Radio နှင့်အတူဆော့ဖျဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် 12 နှစ်ပေါင်းနေခဲ့ရသည်။ ကယ်လီကိုလည်းညွှန်ကြားထုတ်လုပ်, သူ့ကုမ္ပဏီ, Cavegirl Productions နှင့်အတူဆုရလွတ်လပ်သောဇာတ်ကြောင်းများနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတည်းဖြတ်မှုပေါင်း။ သငျသညျကယ်လီနှင့် Cavegirl Productions မှာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် cavegirl.com.
ငါမကြာသေးမီကသူမ၏သရုပ်ဆောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်သူမ၏စိတ်ဝင်စားပါစေဘယ်လိုအတူစတင်, မင်းသမီးနှင့်ထုတ်လုပ်သူကယ်လီ Slagle အင်တာဗျူးတစ်ခုအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး။ "ငါသည် 2000 အတွက်အသိုင်းအဝိုင်းပြဇာတ်ရုံထဲမှာသရုပ်ဆောင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် DC ကအတွက်သေးငယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြဇာတ်ရုံသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ငါသည်ဒေသခံလွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်များတွင် Non-ပြည်ထောင်စုအစိတ်အပိုင်းများကိုရှာဖွေတာစတင်ခဲ့သည်။ ဤသည် Indie ရုပ်ရှင်, ဝဘ်စီးရီးများနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ပိုကြီးတဲ့စိတျအပိုငျးသို့တိုးတက်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်မ TV နဲ့ရုပ်ရှင်များတွင်အခန်းကဏ္ဍနဲ့ SAG-AFTRA သရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါ Josie အတွက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားခဲ့ကြ၏အရှိဆုံးဂုဏ်ယူဖြစ်ကြောင်းကိုငါ၏အပြဇာတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်သူမြား၌ငါ့နှစ်ခုအနှစ်သက်ဆုံးအခန်းကဏ္ဍ အဆိုပါ Misbegotten များအတွက်တစ်ဦးကမွန်း ယူဂျင်းအိုနေးလ်နှင့်ပြဇာတ်ထဲမှာ Hester Swane ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအားဖြင့် ကြောင်၏ Bog အားဖြင့် Marina Carr ကသည်။ နှစ်ဦးစလုံးရှုပ်ထွေးစိတ်ခံစားမှုခရီးအတူအိုငျးရစျအသံထွက်နှင့်အတူဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
ငါလွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်၏ set ကိုတခုတခုအပေါ်မှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် "ငါကင်မရာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တစ် set ကိုကို tick လုပ်နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပျက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါ [တဲ့ 48 နာရီရုပ်ရှင်ပွဲတော် Project မှရုပ်ရှင်တစ်ခုသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်48hourfilm.com] ငါထုတ်လုပ်သူ / ဒါရိုက်တာအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှင့်တကွ, နောက်နှစ်မှာအဘို့အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင် 48HFP အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဤမျှလောက်ဟာတနင်္ဂနွေအတွက်တိုတောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်အောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာမြေပြင်ပြေးဝင်တိုက်နှင့်များ၏အခြေခံသင်ယူဖို့ပြီးပြည့်စုံသောဇာတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့သည် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး။ ဤသည် Cavegirl Productions ၏အစအဦးဖြစ်ခဲ့သည်, ငါတို့သည် 12HFP များအတွက်နှစ်အတွင်း 48 ရုပ်ရှင်လုပ်သွားလေ၏။ ကျနော်တို့ငါအထူးသဖြင့်ပျော်မွေ့သောနှစ်ပေါင်းအများကြီးတိုတောင်းသောရုပ်ရှင် လုပ်. ရုပ်သေးအခွင့်အရေးများအပေါ်တစ်ဦး mockumentary အပါအဝင်အဆုံးထုတ်ကုန်နှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့တစ္ဆေမုဆိုးရုပ်ရှင်သရဲတစ္ဆေများရှုထောင့်ကနေပြောနှင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်အံ့သောငှါအလုပ်အကိုင်များအပေါ်ခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်တ အဆိုပါဖုတ်ကောင်ကမ္ဘာပျက်ကာလအတွင်း။
'' ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင် အန်စာတုံးနှင့်လူ ဂိမ်းကစားနဲ့သူတို့ရဲ့မိတ်ရိုးအလိုက်အကြောင်းဇာတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်အများအပြားရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်အခြားဆုများဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လတ်တလောထုတ်လုပ်မှုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါသညျစမျက်စိ: ထောင်ထဲ & နဂါး၏အနုပညာကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး roleplaying ဂိမ်းဖန်တီးကူညီပေးခဲ့သသောအနုပညာနောက်ကွယ်ကသမိုင်း & ပုံပြင်များစူးစမ်းရာ။ ဒါဟာအစရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆားကစ်အတွက်ဆုနှင့် iTunes နဲ့အမေဇုံအပါအဝင်အများအပြား streaming များပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဖြန့်ဖြူးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
"သရုပ်ဆောင်နဲ့နေစဉ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ညနေပိုင်းနှင့်တနင်္ဂနွေ, ငါသည်သူတို့၏ programming ကို repository ကို, ထိုအကြောင်းအရာ Depot အလုပ်လုပ်ဝဘ်ဆော့ဖ်ဝဲရေးနှင့် QA သို့လေ့လာဆန်းစစ်အဖြစ် National Public Radio နှင့်အတူ 12 နှစ်ပေါင်းနေခဲ့ရသည်။ ငါထို့နောက်ရုပ်ရှင်အချိန်ပြည့်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, National Geographic မှာအလုပ်သင်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်တစ်နှစ်အဘို့မိမိတို့ Image ကိုငွေကောက်ခံအတွက်လက်ထောက်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာအဖြစ်အရေးကြီးသောအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့၏။ "
ကျွန်မသူမ NAB နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်လို Slagle မေးတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ RHED Pixel မှာအလုပ်လုပ်နေစဉ် "ငါမှာ session ကိုသင်ပေးကူညီရန် Rich Harrington မေးခဲ့သည် NAB ပြရန် Vegas မှာသင့်ရဲ့ယူကျု့ချန်နယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကို။ NAB နှင့်အတူအခြားအစကားပြောတဲ့တွေ့ဆုံမှုမှဒီအခဲ, နောက်ဆုံးမှာလွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်, ပေမယ့, သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ Non-သရုပ်ဆောင်များကို directing နှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ထုတ်လုပ်အပေါ်အတန်းထည့်သွင်းရန်။ NAB မှာစကားပြောသောတစ်ခုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောကွန်ရက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးကိုမှထိတွေ့မှုနှင့်အတူများစွာသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့သည်။ "
လာမည့်လတွင်ဖွင့်ရက်: ", ဦးတည်မင်းသားများနှင့် Non-မင်းသားများအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရယူခြင်း" Slagle "သင်၏လွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်ပွဲတော် Crowdfunding" နှင့်နှစ်ဦးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပါလိမ့်မည် NAB ပြရန် နယူးယောက်။ "ကျနော့် '' Crowdfunding သင့်လွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်ပွဲတော် '' တင်ဆက်မှုအစပြုသူနှင့်အဆင့်မြင့် Indie ဇာတ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုငွေကြေးလူကြိုက်များပေမယ့ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု. အကောင်းဆုံးမဟာဗျူဟာရှာဖွေနေကြသူမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများအဘို့အဓိပ်ပာသည်။ ငါစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစီစဉ်သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုဖြိုမယ့်ကမ်ပိန်းကိုဗီဒီယိုအတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်အခွင့်အရေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, သင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး running နှင့်မှတစ်ဆင့်အောက်ပါနှင့်ပျော်ရွှင်မျှဝေသူကိုစောင့်ရှောက်, ရှာတွေ့နှင့်သင့်ပရိသတ်ကိုသုတေသနအကြံပြုပလက်ဖောင်းကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။
' "အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရယူခြင်း: ဦးတည်မင်းသားများနှင့် Non-မင်းသားများ' 'ဇာတ်ကြောင်း, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်ကော်ပိုရိတ်ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင်အများအပြားလယ်ကွင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဒါရိုက်တာများအဘို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါသင်တန်းကိုအတူလုပ်ကိုင်, သတ္တုများပုံသွန်း, ပြင်ဆင်မှု, ဆက်သွယ်ရေး, အစမ်းလေ့ကျင့်, စွမ်းဆောင်ရည်, သေနတ်ပစ်အကြံပေးချက်များ, Non-သရုပ်ဆောင်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အင်တာဗျူးတွေနဲ့တူအထူးကးများအတွက်အကြံဉာဏ်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည် အထူးသက်ရောက်မှုများနှင့်ကလေးများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်။ "
Slagle ပုပြီးနောက်အလုပ်များသူမ၏စောင့်ရှောက်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ် NAB ပြရန် နယူးယောက်အဖြစ်ကောင်းစွာ။ "ငါသည်လက်ရှိ NGP VAN, ဒီမိုကရက်တစ်နှင့်တိုးတက်သောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှဦးဆောင်နည်းပညာပံ့ပိုးပေးဘို့အလေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းအရာဟာထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း, Cavegirl Productions နောက်တစ်နေ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, လူကြိုက်အများဆုံးကုန်သွယ်ကဒ်ဂိမ်းမှာကြည့်အပေါ်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ကြောင်းကိုငါ အဆိုပါ Spark စတငျခဲ့သညျ - မှော်၏ပုံပြင်: အဆိုပါစုရုံးခြင်း။ "
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2019 NAB Show ကို New York မြို့ 48 နာရီရုပ်ရှင်ပွဲတော်စီမံကိန်း ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း Cavegirl Productions ကယ်လီ Slagle NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB16 nabshow National Geographic အန်ပီအာရ် 2019-10-15
ယခင်: Content Delivery & Security Association သည်အကြောင်းအရာများကိုကာကွယ်သည့်လကို Bob Gold & Associates နှင့်စတင်ခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: FSR ၏ Smart-Way စနစ်သည် NECA 2019 အတွင်းတွင်ပြပွဲကိုရပ်လိုက်သည်